२०७१ कार्तिक १५ गते | Saugat : Naya Yougbodh
२०७१ कार्तिक १५ गते
22nd November 2014	·0Comments
फुचुंग्री : सुन्नु भो काका ? “अरुलाई अरुको रन्को, घरज्वाईंलाई खानकै रन्को” भनेझैं हाम्रा नेताहरुलाई चाहिँ सत्तामै आँखा लगाउन ठिक्क छ रे । त्यै भएर पो संविधान नबनेको रै’छ हगि ?
काका : “हामी जोगी हुनलाई राजनीति गरेको हैन” भन्छन् तेरा नेता अंकलहरु । सत्ताकै लागि राजनीति गरेको भए पनि कमसेकम हलो नअड्काए हुन्थ्यो क्यारे । सबैले “मेरो गोरुको बाह्रै टक्का” भन्न थालेपछि कसरी बन्छ त संविधान ?
फुचुंग्री : अनि हाम्रा कांग्रेस र एमालेका अंकलहरु त ७ प्रदेश भएको नेपाल बनाउने सहमतिमा आए रे । एमाओवादी चाहिँ उफ्रेको उफ्री छ । यसमा सहमति होला त ?
काका : खोइ फुच्ची ? कसैले एक बित्ता जमिन थप्ने होइनन् क्यारे । उही पृथ्वीनारायणले आर्जेको नेपाललाई काट्टकुट्ट पार्ने त हुन् नि । जे भए पनि सबैलाई पायक पर्ने र सजिलो हुने बनाए हुन्थ्यो क्यारे । आखिर पदबाहेक संख्यामा अरु के राखेको छ र ?
फुचुंग्री : हाम्रा नेताहरुले त कसलाई पो जित्थे र काका ? तर केटाहरुले चाहिँ मूढेबलले भए पनि क्रिकेटमा मै हुँ भन्ने देशलाई पनि पछारेर नेपालको इज्जत बढाएछन् नि ?
काका : हो त भन्या । राम्रो सेवा, सुविधा र तालिम पाउने हो भने त विश्व नै हल्लाइदिन्थे केटाहरुले । मूढेबलले भए पनि पछारेर हामी नेपालीको नाक राख्देका छन् । अब सरकारले पनि क्रिकेटका लागि केही सोच्ने बेला आयो ।
फुचुंग्री : हाम्रा हात्ती पार्टीका हात्ती नेताहरुको पनि हरिबिजोग नै हुने भो है काका ? जनआन्दोलनको सफलतादेखि बैठक बस्न थालेको अझैसम्म पनि यिन्ले माखो मार्न सकेनन् है ?
काका : उफ !!! के के सोध्छे यो फुचुंग्री पनि ???!!!